Isikhwama sokudla kwesilwane esifuywayo esidayisa yonke impahla Umkhiqizi Nomhlinzeki |Yingzhicai
Igama Spoutedizikhwama zokudla kwekati / pet ukudla
Umthamo omkhulu 30-2 kg
Izinhlelo zokusebenza Ukudla kwezinja, ukudla kwekati, noma yikuphi ukudla kwezilwane ezifuywayo
Uhlobo lwesikhwama Isikhwama sokudla kwesilwane esifuywayo esiphundukile / isikhwama sokudla sesilwane esifuywayo
Izitifiketi ISO 9001;I-ISO 14001, BRC-PACKAGING.
Isakhiwo kanye nempahla I-PET/PE;I-PET/NY/PE;I-PET/AL/NY/PE;I-PET/MPET/PE
Izesekeli Isikhwama sesikhwama
Ukuphrinta Ubuningi obungu-10imibala.
Inqubo yokuphrinta Ukuphrinta kwe-Gravure
Amandla okukhiqiza 50,000 ama-pcs ngosuku
Imbobo ezenzakalelayo yokuthunyelwa I-Qingdao, China
Izikhwama ezi-1.spouted ziwuhlelo lokupakisha olukhulile ekufakweni kokudla kwekati noma kwenja, okukhangayo kokubili ngentengo kanye nekhwalithi.Iningi lokupakishwa kokudla kwekati emakethe lisebenzisa izikhwama ze-quad seal, futhi,Ukuphrinta okunembile kunganikeza ukubukeka okuhle okubonakalayo kwemikhiqizo yakho.
2.Isikhwama se-retort singaphekwa ku-130°C imizuzu engu-30, esihlangabezana ngokugcwele nezimo zokuvala inzalo ye-UHT, okuqinisekisa ukuphepha nokuhlanzeka kokudla kwesilwane esifuywayo esingaphakathi kwesikhwama.
Impahla evimbelayo ephezulu yesikhwama sokubuyisela ingaqinisekisa isimo esihlanzekile sokugcinwa kokudla kwesilwane esifuywayo somhluzi ngemva kokuvalwa inzalo, okuqukethwe ngaphakathi kwesikhwama kungakhumbula ikhwalithi enhle futhi akuthintwa kalula indawo ezungezile yangaphandle.
Umthamo wesikhwama esiyisicaba se-seal seal eyi-8 mncane kakhulu, ulungele ukwenza ukudla okuhlukahlukene kwezilwane ezifuywayo ze-gravy ezincane.fasion kakhulu.
Izikhwama zethu zokudla kwezilwane ezifuywayo, zisebenzisa izinto zokupakisha ezisimeme futhi ezinobungani nemvelo, seziphenduke umkhiqizo obalulekile wemikhiqizo eminingi muva nje.
Izici zezikhwama ze-retort zifaneleka kakhulu ekwenzeni izikhwama zokudla ezifuywayo ezimanzi, ngoba ngokuvamile lolu hlobo lokudla kwekati olumanzi ludinga ukuvalwa inzalo ngokupheka.
Ngezici ezinhle zokuma izikhwama zethu ze-retort zingaboniswa kahle eshalofini.
Imvamisa umthamo wezikhwama zethu zokumisa i-stand up awumkhulu, nokho kulula ukuvezwa ezindaweni ezingenamahhuku nanoma yiziphi ezinye izinsiza.
Okwedlule: isikhwama se-sauce
Olandelayo: Isikhwama sesiphuzo sezithelo